Nivadika i Joasy Noho ny Naman-dratsy | Ampianaro ny Zanakao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bicol Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Pangasinan Persianina Poloney Portogey (Brezila) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Nivadika Tamin’i Jehovah i Joasy Noho ny Naman-dratsy
RATSY be, tamin’izay fotoana izay, ny fiainana tao Jerosalema, ilay tanàna nisy ny tempolin’Andriamanitra. Novonoin’i Atalia i Ahazia Mpanjaka, zanany lahy. Tsy ela taorian’izay, dia novonoiny koa ny zanakalahin’i Ahazia, nefa zafikeliny ihany ireo! Fantatrao ve ny antony?... * Amin’izay dia izy no ho mpanjaka fa tsy ireo.
Zafikelin’i Atalia koa i Joasy, izay mbola zazakely tamin’izany. Voavonjy izy, nefa tsy fantatr’io renibeny io akory. Tianao ho fantatra ve ny fomba namonjena azy?... Nafenin’i Joseba nenitoany, tao amin’ny tempolin’Andriamanitra izy. Mpisoronabe tao mantsy i Joiada vadin’i Joseba. Nataon’izy mivady àry izay hiarovana an’i Joasy.
Nafenina tao amin’ny tempoly nandritra ny enin-taona i Joasy. Nampianarina ny zava-drehetra momba an’i Jehovah Andriamanitra sy ny didiny izy tao. Rehefa feno fito taona i Joasy, dia nanao zavatra i Joiada mba hanaovana azy ho mpanjaka. Tianao ho fantatra ve izay nataon’i Joiada, sy izay nanjo an’i Atalia, ilay mpanjakavavy ratsy fanahy?...
Nanana mpiambina manokana ny mpanjaka tany Jerosalema. Nantsoin’i Joiada mangingina izy ireo, ary notantarainy ny fomba namonjen’izy mivady an’ilay zanak’i Ahazia Mpanjaka. Nasehony azy ireo avy eo i Joasy, ary nanaiky ireo hoe izy tokoa no tokony ho mpanjaka. Nisy tetika natao àry mba hanatanterahana izany.
Nasehon’i Joiada an’ny vahoaka i Joasy, ary nampanaoviny satroboninahitra. “Nitehaka izy ireo, sady nilaza hoe: ‘Ho ela velona anie ny mpanjaka!’ ” Nohodidinin’ny mpiambina i Joasy mba hiarovana azy. Rehefa ren’i Atalia ny horakoraky ny olona, dia nivoaka izy ary nilaza fa misy manongam-panjakana. Nasain’i Joiada novonoina ho faty anefa i Atalia.—2 Mpanjaka 11:1-16.
Novonjena i Joasy
Nankatò an’i Joiada foana ve i Joasy, ka nanao ny tsara?... Nanao ny tsara izy tamin’i Joiada mbola velona. Nasainy nanome vola hanamboarana ny tempolin’Andriamanitra mihitsy aza ny vahoaka. Tsy noraharahain’i Ahazia rainy sy Jorama raibeny mantsy izy io. Andeha hojerentsika anefa izay nitranga rehefa maty i Joiada Mpisoronabe.—2 Mpanjaka 12:1-16.
Efa 40 taona teo ho eo i Joasy tamin’izay. Tsy ninamana tamin’ny mpanompon’i Jehovah intsony izy, fa mpanompo sampy indray no nataony namana. I Zakaria, zanak’i Joiada no mpisoron’i Jehovah, tamin’izay. Ahoana hoy i Zakaria, rehefa hitany ny zava-dratsy nataon’i Joasy?...
Hoy i Zakaria taminy: ‘Nahafoy an’i Jehovah ianao, ka mba hafoiny koa.’ Tezitra be i Joasy rehefa nandre izany, ka nasainy notoraham-bato ho faty i Zakaria. Mba eritrereto ange e! Novonjena tamin’ny mpamono olona i Joasy, nefa izy indray izao no nampamono an’i Zakaria.—2 Tantara 24:1-3, 15-22.
Inona no azontsika ianarana avy amin’io tantara io?... Tsy tiantsika ny hitovy amin’i Atalia, izay sady tsy nanam-pitiavana no nasiaka be. Tokony hotiavintsika kosa ny mpiara-mivavaka amintsika, ary na dia ny fahavalontsika aza. Izany no nampianarin’i Jesosy. (Matio 5:44; Jaona 13:34, 35) Tadidio koa izao: Raha efa nanao ny tsara toa an’i Joasy isika ary mbola te hanao an’izany, dia olona tia an’i Jehovah sy mandrisika antsika hanompo azy foana no tokony ho namantsika.
Iza no saika hamono an’i Joasy, ary ahoana no fomba namonjena azy?
Ahoana no naha lasa mpanjaka an’i Joasy, ary inona no zavatra tsara nataony?
Nahoana i Joasy no lasa ratsy fanahy, ary iza no novonoiny?
Inona no ianarantsika avy amin’io tantara ara-baiboly io?
Hizara Hizara Nivadika Tamin’i Jehovah i Joasy Noho ny Naman-dratsy
w09 1/4 p. 24-25